ယာဉ်ဘီယာ Ailyak - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Georgi Hristov Ailyak Craft ဘီယာနောက်ကွယ်ကသူဖြစ်၏။ တစ်ဘဏ္ဍာရေးလေ့လာဆန်းစစ်အဖြစ်သူ၏နေ့စဉ်အလုပ်တခုဘီယာသောင်မတင်၏ဖြစ်စဉ်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာထဲကနေသူ့ကိုရပ်တန့်မထားဘူး။
သူတို့ကိုငါရေတွက်ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ငါတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းဘီယာအဖြစ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များကိုမြည်းစမ်းဖို့ကြိုးစားပါဘူး။ ငါတူစတိုင်တစ်ခုဘီယာအပေါ်အလုပ်မလုပ်သောအခါ, နောက်ပိုင်းမှာ, ငါသည်နောက်ထပ်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
ဘီယာမျိုးစုံမြည်းစမ်းသောအခါ, သင်မြည်းစမ်းဖို့နဲ့မျှော်လင့်သောအရာကိုသိရန်နှင့် ပတ်သက်. တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာစိတ်ကူးတစ်ခုရှိသည်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာ, ဘီယာက၎င်း၏စတိုင်နှုန်းအဖြစ်က၎င်း၏အကောင်းဆုံးအပူချိန်အအေးရမည်ဖြစ်သည်။ Ales ကြောင့်အရသာဟာသူတို့ရဲ့စည်းစိမ်နှင့်အမျိုးမျိုး၏, 12-14 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အကြားအပူချိန်မှာ '' ဖွင့် '' ။ ထိုအခါဘီယာအေးမြနှစ်ဦးစလုံးသည်နှင့်အဲဒါကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမွှေးနံ့သာများနှင့်အရသာခံစားရရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Eurolager အဖြစ် lagers အဘို့, တဦးတည်း humulus မဆို aftertastes detect နိုင်လမ်းမရှိသောအရာအတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူအိုးထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ဘာမျှမပျောက်ပါလိမ့်မည်။ A ကောင်းဆုံးဘီယာပျော်မွေ့တတ်၏သောဘီယာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Ailyak Craft ဘီယာတှငျအဘယျရှိသလော
ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောဂျာမန် Malt ကိုသုံးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအမျိုးပေါင်း hops - ဘူလ်ဂေးရီးယား, ယူအက်စ်အေ, ဂျပန်, နယူးဇီလန်နှင့်အင်္ဂလန်ကနေ။
ကျနော်တို့အများဆုံးနီးကပ်စွာဒီဘီယာစတိုင်ဘို့ငါတို့စိတ်ကူး fit သောသူတို့ကိုရွေးပါ။
ကျနော်တို့အလှည့်တစ်ဦးခြောက်သွေ့တဲ့ finish ကိုရှိပါတယ်ပေးသောအင်္ဂလိပ်ဆေးနှင့်အတူ fruity မှတ်စုပေးသောအမေရိကန်တဆေး, အသုံးပြုတဲ့အခါဥပမာ, ပြီးတော့ကျနော်တို့ဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘီယာအရပေလိမ့်မည်။
ငါပြီးသားအိမ်မှာငါ့ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဝံစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ချင်တယ်။ အဘယ်သို့ငါ start သလဲ?
ကောင်းပြီ, သင်မီးဖိုပေါ်သေးငယ်တဲ့ casserole အချို့ဘီယာနိုင်, သို့မဟုတ်သင်လသာဆောင်ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့တိုင်ကီထဲမှာတချို့ပိုပြီးစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ချင်ပေမည်။ လွယ်ကူသောစတင်ဘို့ငါသည်သင်တို့ကိုအရည် Malt သုံးပါနဲ့အင်တာနက်ပေါ် Homebrew '' ဖိုရမ်များအချို့ချက်ပြုတ်နည်းများကိုဖတ်ရှုအကြံပြုလိမ့်မယ်။
ရဲ့ရိုးရာဘီယာသောက်သုံးခြင်းဟာစားပွဲ၌နှစ်ခုဘီယာချစ်သူများစိတ်ကူးကြစို့နဲ့သူတို့ကိုလာမယ့်နောက်ထပ်စားပွဲ၌, အဆွေခင်ပွန်းနှစ်ယောက် Ailyak ယာဉ်ဘီယာသောက်သုံးနေကြသည်။ အဘယ်အရာကို 30 မိနစ်ဖြစ်ပျက်ကြမည်နည်း
Ailyak ကိုမြည်းစမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူကအခြားနှစ်ဦးကိုတကယ် joie က de vivre နှင့်သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အရသာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်မှာရည်မှန်းကြသည်, လူတွေလွတ်လပ်ခွင့်ကိုရှာခြင်းငှါစေဘဝကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ဘယ်တော့မှမေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ် "ငါးကြင်း diem!" ရဲ့အပြည့်အဝအသက်ရှင်ရန်အထူးအခိုက်အဘို့မစောင့်ကြပါစို့။
သငျသညျ Craft ဘီယာ Ailyak အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်:
Facebook ပေါ်တွင်ယာဉ်ဘီယာ Ailyak
Instagram ကိုအပေါ်ယာဉ်ဘီယာ Ailyak
ailyak, ဘီယာ, ယာဉ်ဘီယာ, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, startup | | rating:5/ 30